Jurgen Klopp Ayaa Diiday Inuu Meesha Ka Saaro Wararka Xanta Ah Ee La Xiriirinaya Liverpool Saxiixa Thiago Alcantara | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
jurgen Klopp ayaa diiday inuu meesha ka saaro wararka xanta ah ee la xiriirinaya Liverpool saxiixa Thiago Alcantara
Ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu u dhaqaaqayo Anfield, tababaraha Reds ayaana u dhaqaaqin inuu meesha ka saaro wararka la isla dhexmarayo ee ku saabsan shirkiisa jaraa’id.
jurgen Klopp ayaa diiday inuu meesha ka saaro wararka xanta ah ee la xiriirinaya Liverpool saxiixa Thiago Alcantara, tababaraha Reds ayaa qirtay inay “fiican tahay” inuu arko wararka xanta ah ee sheegaya in xiddiga Bayern Munich uu ku sii jeedo Anfield xagaagan.
Thiago ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu u wareegayo Merseyside, iyadoo wararka ka Soo baxay Jarmalka ay sheegayaan in ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Spain uu diyaar u yahay inuu soo gabagabeeyo todobadiisa sano ee uu ku sugan yahay Allianz Arena.
Liverpool, ilaa iyo haatan, sifiican ayey ugahadashay wararka la isla dhexmarayo, iyo shir jaraa’id oo ay ku eegaan kulankooda furitaanka Premier League ee ay la ciyaarayaan Leeds Uniten
Markii la weydiiyay hadii uu soo afjari karo wararka xanta ah, tababaraha Reds wuxuu yiri: “Haddii aan allifsan karo hada soo afjarayo mala’awaalka, runtii taajir ayaan noqon lahaa!
“Ma soo afjari karo wararka la isla dhexmarayo inta uu furan yahay suuqa kala iibsiga, intaas ayaan dhihi karaa. Waxa Aan sheegay in Thiago Alcantara uu runtii yahay ciyaaryahan wanaagsan Wakhti Hore